About Us - Changzhou kwavari Electronic Co., Ltd.
Kwavari Electronic Technology Co., Ltd.
Chii chaunoda, tinogona gadzirisa kakawanda, Logo, ruvara, chimiro
Zvakaoma kuwana rakakodzera Anti-kuba mhinduro vamwe zvinhu dzimwe nguva. Kwavari ndiko kufara pfupiro magadzirirwo mhinduro zvinhu izvi mahara maererano vatengi 'zvinodiwa.
Kwavari unyanzvi muna R & D, kubudisa kumusika Eas zvigadzirwa. Kwavari ane rizere-siyana Eas zvigadzirwa: RF / NDIRI zvakaoma Tag, RF / AM chitaridzi, Eas RF / AM kuchengeteka hurongwa, Eas detacher etc.
Mafomu zvinosanganisira magetsi, Textiles, shangu uye muzvitoro. zvigadzirwa edu dzakakurumbira mudzimba uye dzimwe kumusika.
Kwavari yabudirira ISO9001 chitupa, CE gwaro uye SGS chitupa nokuda Eas hurongwa. Svinga zvinhu zvedu uye ruzivo wo kuwana bvumidzwa kudzivirirwa.
KUBVIRA pagore 2001
Professional uye nechido R & D chikwata waisangobatsira kwavari kubatsira vatengi yedu pamwe mufashoni uye inoshanda nepurani. 10 inogadzirwa mitsetse pamwe zvakazara akagadzirwa yepakutanga kugadzirwa zvivako, midziyo uye kuedza zviridzwa dzinoita kwavari kupa zvibereko yakavimbika yepamusoro uye kukwikwidzana mutengo dzedu vatengi panguva yakakodzera.
Kwavari anogona kubereka zvidimbu mamiriyoni 100. Eas Tags uye mamiriyoni 800 zvimedu AM Labels pagore.
All zvigadzirwa anobudiswa uye vaedzwa zvakasimba maererano nyika uye dzakawanda mureza.
Chii Clients Vanoti?
Isu takanga tava kwavari kwemakore anopfuura 2 years uye vave penya panguva rokufudza redu. Dzavo mutengo nechipiriso uye vatengi zvave zvakaisvonaka, kuita basa redu rikurumidze. --- Titan Thompson
Kwavari kuti tefa chigadzirwa atibatsira kuchengeta kudzora rokutenga yedu vachigere yokuderedza mari. Kwavari rakabatsirawo isu hwokugadza Eas aramu nenyika yacho. --- Joy Jansen
Zvave mufaro zvechokwadi kuti pamwe kwavari Co. nokutendeka kwavo kubasa uye nyanzvi risanyatsobuda yavo chikuru zvinhu kambani. Ndinoda kuratidza kuonga kwangu kuna kwavari chikwata nokutsigira kwavo kukuru pamusoro pamakore takava mukana pamwe navo. ------- Amari Wilder
pamwe kukuru kwavari kunyanya kushamwaridzana Ben. Ben ane mukomana akanaka zvechokwadi; tinofanira kuva mberi pamwe ------ Jamie Smith
Mini Eas Detacher , Glass Tag Detacher , Eas Glass Tag Detacher , Optical Tag Detacher , Magnetic Key Detacher , Security Detacher Cap ,